Nolosha Cusub :: Maqal/Muuqaal :: Koobka Adduunka 2010
Qof kale u dir
Walaalayaalow, waxaynu ku faraxsannahay inaan idin soo gudbino warbixin saddex daqiiqo ah oo ku saabsan Koobka Kubadda Cagta Adduunka oo martigagliyay waddanka Koonfur Afrika. Fadlan liiska hoose ka dooro oo guji taariikhda aad rabtid inaad dhegeysato.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban in webkayaga Nolosha Cusub uu u billaway bog ku saabsan Koobka Kubadda Cagta Adduunka. Maadaama ay ujeeddadeenna ugu weyni tahay inaan soo gudbino warka wanaagsan ee ah sida ay dadku nabad Ilaahay ula yeelan lahaayeen. Laakiinse, waxaan doonaynaa inaan dadka soo booqda hoygeennna oo aan adduunka harreerihiisa fahansiino inaanay diintayadu ciyaaraha mamnuucin. Ma nihin sida hoggaamiyaal diimeed kale oo badani baraan, oo Erayga Ilaahay kama helayno wax ciyaaraha mamnuucaya, oo diidaya inaan ciyaaraha ka qayb qaadano ama daawano.
Xaqiiqo ahaan, meelo dhowr ah ayuu Baybalku ciyaaraha ku sheegay. Tusaale ahaan, Warqaddii koowaad ee rasuul Bawlos u qoray dadkii reer Korintos, wuxuu isagu isticmaalayaa tusaalaha ciyaaryahano ordaya, kaasoo uu nolosha qofka rumaytaha ah ku dabaqay.
"24 Miyaanad ogayn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan, laakiin mid uun baa dheefta hela? Sidaas u orda inaad heshaan. 25 Kii cayaarta aad ugu dadaalaa, wax walba ayuu iska dhawraa. Kuwaasu haddaba waxay sidaas u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan, innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanaynin. 26 Haddaba anigu uma ordo qasdila'aan, uma feedhtamo sida mid dabaysha ku dhufanaya. 27 Laakiin jidhkaygaan dhibaa oo addoon ka dhigaa si markaan qaar kale injiilka ku wacdiyo aan qudhayda lay diidin."
Dabcan, waxaan aragnaa tusaalayaal badan oo taageerayaasha ciyaaraha ee adduunka ah oo ka badbadis ah, waxayna naftooda ku saleeyaan ciyaaraha intii ay noloshooda ku salayn lahaayeen caabudaada Ilaahay. Waa inaanan khaladkan oo kale samayn, laakiinse waa inaan samayn khaladka ah inaan ciyaaraha gebi ahaantoodaba mamnuucno. Waayo, ciyaaruhu ciyaaraha faa’ido badan ayay leeyihin. Waxaana ka mid ah: barashada dabeecadda wanaagsan, wada-shaqaynta, iyo horumarinta caafimaadka wanaagsan.
Waxaan rajeynaynaa inaad ka heli doontan wararka u hanbaarsan yahay boggani Koobka Kubada Cagta Addunka. Haddii aad haysid wax talo iyo tusaale ah fadlan inala soo xiriir ciwaankayagu, guji "Nagala soo xiriir" oo aad ku arki kartid qaybta sare ee dhanka midigta ee boggan.
Warbixin ku saabsan Koobka Kubadda Cagta Adduunka
Kubadda Cagta--Wanaag & Qiimaha.mp3
Kubadda Cagta--ha illowbin Awoodda heerka ugu saraysa.mp3
Kubadda Cagta & Xiriirka Ilaah--kee baa muhiim.mp3
Kubadda Cagta & Ciyaarta Wanaagsan.mp3
07-08 Koobka Adduunka.mp3
07-04 Koobka Adduunka.mp3
07-03 Koobka Adduunka.mp3
06-30 Koobka Adduunka.mp3
06-26 Koobka Adduunka.mp3
06-24 Koobka Adduunka.mp3
06-22 Koobka Adduunka.mp3
06-20 Koobka Adduunka.mp3
06-19 Koobka Adduunka.mp3
06-18 Koobka Adduunka.mp3
06-17 Koobka Adduunka.mp3
06-15 Koobka Adduunka.mp3
06-14 Koobka Adduunka.mp3
06-13 Koobka Adduunka.mp3
06-12 Koobka Adduunka.mp3
06-11 Koobka Adduunka.mp3
Si aad u soo dejisato faylka, dhanka midig ka riix falaar-wadaha ( mawska kombiyuutarkaaga), dabadeednna guji 'Save Target' si ay kuugu furanto meel aad kombiyuutarkaaga dhexdiisa ugu soo dejin karto ood ugu kaydsato faylka.